Jananinepal.comरोचक Archives - Page2of 100 - Jananinepal.com
सेक्स कुलत के हो त?
एजेन्सी: सामान्य अर्थमा यौन व्यवहार व्यक्तिको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जानु नै सेक्स कुलत हो । यस्तो लत बसेका मानिस अधिकांश समय सेक्सकै बारेमा सोचेर बिताउँछन् । अश्लील फिल्म वा साइट हेर्नु उनीहरूको दिनचर्या नै बन्न सक्छ । यसले मानिसको व्यवहारमा समेत परिवर्तन आउन थाल्छ । यसको असरले व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवन नै अस्तव्यस्त हुनपुग्छ । […]
जीवन सफल बनाउने ७ शुत्र हरु
सफल जीवन जीउने चाहाना सबैको हुन्छ। जसको लागि संघर्ष गर्न जरुरी छ । मानव जीवनमा उतारचढाव भईरहनु वा आईरहनु स्वभाविक हो । त्यो उतारचढावहरुलाई सामाना गर्दै सहि मार्ग अंगाल्ने हो भने असम्भव भन्ने कुरा केहि पनि छैनन् । सफल जीवनको लागि मानसिक रुपमा पनि स्वस्थ हुनुपर्छ । जसले यस्ता उतारचढावलाई सजिलैसँग सामना गर्न सकिन्छ । […]
असल महिलामा हुनुपर्ने ३२ लक्षणहरु के-के हुन ?
हामीले कुनै पनि महिलामा ३२ लक्षण हुनु राम्रो भनेर सुन्ने गरेका छौँ । कुनै पनि महिलामा ३२ लक्षण हुनु धर्मशास्त्रमै राम्रो मानिन्छ । यद्यपी ३२ लक्षण भनेका के के हुन् हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । मानिसले भन्ने गरेका ३२ लक्षण पढ्नुहोस । १. पद्मासनमा बस्दा वृत्ताकार (गोलो) आसनमा हुनु २. हातका औँला लामा–लामा हुनु ३. […]
यौन सम्पर्क कसरी गर्दा गर्भ रहन्छ वा रहदैन?
एजेन्सी: यौन मानवीय र जिवित प्राणीको नैसंर्गीक आवश्यकता नै हो । मानिसलाई खानपानको जरुरी भएजस्तै सेक्सको पनि उत्तिकै मात्रामा आवश्यकता पर्छ । तर सेक्सका पनि चरण र प्रक्रियाहरु हुन्छन् । विबाहितले गर्ने सेक्स र अविवाहितले गर्ने सेक्समा जोखिम र चुनौताहरु उत्तिकै मात्रामा अघि पछि हुन्छन् । सेक्समा रोमान्स र आनन्दको कुरा त छँदैछ । यससँगै […]
महिलाहरूको लागि सेक्स फाइदै फाइदा
एजेन्सी: महिलाहरुका लागि सेक्स गर्नुका फाइदाहरु निक्कै छन् । के तपाईंलाई थाहा छ? सेक्स गर्नाले महिलाको तौल घट्छ, छाला चम्किलो हुन्छ र मुटुको रोगहरु पनि लाग्दैन । महिलाहरुका लागि सेक्स किन आवश्यक छ र यसको फाइदा के हो थाहा पाउनुहोस्ः १. दुखाईबाट मुक्तिः दुखाइबाट मुक्ति दिन सेक्स प्राकृतिक औषधी हो । सेक्स गर्नाले अक्सिटसिनलाई नष्ट […]
कुन बेला र कति पटक सम्भोग गर्दा राम्रो ?
एजेन्सी: साच्चै भन्ने हो भने सेक्स गर्ने कुनै निश्चित समय छैन न त कति पटक गर्ने भन्ने कुनै वष्तुनिष्ठ सिद्धान्त नै छ । मानिसहरु आफ्नो समय र उपयुक्तताका आधारमा यौन कर्म गर्ने गर्दछन् । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्ने भन्ने मान्यता भने हामीमाझ स्थापित नै छ । तर अध्ययनहरुले भनेका छन् कि रातिमा भन्दा विहानको सेक्स […]
यस्ता स्त्रीले घरमा उठिवास लगाउछन
सेक्स गर्दा ६२ प्रतिशत महिलालाई आफ्नो पार्टनरको यस्तो व्यवहार मनपर्छ
एजेन्सी: हाम्रो समाजमा यौनको विषयमा कुराकानी गर्न वर्जित छ । अझै महिलाहरुले यौनको बारेमा खुल्ला भएर कुराकानी गरे भने त उनीहरुलाई अनेक लान्छना लगाइन्छ । त्यसैले पनि महिलाहरु यौन वा सेक्सको बारेमा त्यति खुल्दैनन् । यौनको बारेमा सबैलाई चासो भएपनि सबैले यसलाई दबाएर राख्छन् । यस्तोमा तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग बेडमा एक गरमागरम समय बिताउँदै हुनुहुन्छ […]
नियमित यौंन सम्पर्क नहुँदा देखिने समस्याहरु
तपाईले नियमित रुपमा यौन सम्पर्क गर्ने गर्नुभएको छैन भने तपाईलाई विभिन्न खालका समस्याहरु देखिन सक्छन् । किनभने यौन सम्पर्क गर्दा एडोर्फीन हर्मोन अर्थात आनन्द दिने हर्मोन निस्कासन हुन्छ जो तनावलाई नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्छ । -यौन दुर्वलताः अध्ययनको अनुसार जो व्यक्ति सातामा कम्तीमा दुई पटक यौन सम्पर्क गर्छ उसमा इरेक्टाईल डिस्फङसन (यौन दुर्वलता) त्यति हुँदैन […]
के तपाईलाई यौन सम्पर्क गर्न मन लाग्दैन ? यी हुन् यौन शक्ति बढाउने घरेलु उपाय
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार
एजेन्सी: तपाईको यौन जीवनमा धेरै समस्याहरु हुन सक्छन् । हामीले समस्याहरु त्यसै लुकाएर बस्नुभन्दा पनि तीनको समाधान खोज्नु पर्छ । नियमित यौन क्रियाकलापमा सामेल व्यक्ति र सामेल हुन नपाएको व्यक्तिबीचको व्यवहारमा निकै फरक हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ सेक्स स्वास्थ्यको दर्पण हो । यौंन शक्ति बढाउनका लागि तपाईले विभिन्न खालको औषधी उपचार गराउने गर्नुभएको छ होला […]